Ọnye na-bụ ụlọ ọrụ nyocha MyBirdDNA?
Blọ nyocha nke MyBirdDNA bụ ụlọ izizi nke mbụ zuru ezu maka nyocha mmekọahụ sexing na nnwale avian.
Onu otutu ihe nlere na nguzosi ike na enyere anyi aka inye ndi ahia anyi ezi ezi nke oma ma nwekwaa ezigbo onwa, oge na adighi anya.
A na-eme nyocha DNA niile site na nyocha nke MyBirdDNA plateform na France.
Anyị na-atụ anya na ị ga-enwe ọ yourụ ahụmịhe anyị na anyị!
Ọnye na-bụ ụlọ ọrụ nyocha MyBirdDNA? e ikpeazụ gbanwetụrụ: July 25th, 2016 site MybirdDNA
How to do an order to MyBirdDNA? e ikpeazụ gbanwetụrụ: January 31st, 2017 site MybirdDNA
What is the delay of an analysis? e ikpeazụ gbanwetụrụ: September 2nd, 2016 site MybirdDNA
Can you send me collection kits ? e ikpeazụ gbanwetụrụ: September 2nd, 2016 site MybirdDNA
You can download them in the “My nyochara” tab.
Can I use my own collection kits or those of another lab ? e ikpeazụ gbanwetụrụ: June 14th, 2016 site MybirdDNA
Do you have receive my collection kits ? e ikpeazụ gbanwetụrụ: July 29th, 2016 site MybirdDNA
Kedu ihe bụ eziokwu nke nyocha DNA?
Kedu ihe bụ eziokwu nke nyocha DNA? e ikpeazụ gbanwetụrụ: July 27th, 2016 site MybirdDNA
Kedu ụdị ụdị nlele m kwesịrị inye?
Kedu ụdị ụdị nlele m kwesịrị inye? e ikpeazụ gbanwetụrụ: August 10th, 2016 site MybirdDNA
How to collect feathers for DNA test ? e ikpeazụ gbanwetụrụ: September 14th, 2018 site MybirdDNA
How to perform a cloacal swab ? e ikpeazụ gbanwetụrụ: September 14th, 2018 site MybirdDNA
Can you send me paper certificates ? e ikpeazụ gbanwetụrụ: February 6th, 2019 site MybirdDNA
Are the DNA certificates translated in my language? e ikpeazụ gbanwetụrụ: July 27th, 2016 site MybirdDNA
The name of my species is not in my language. How can I translate it so that the species name in the certificate will be in my language? e ikpeazụ gbanwetụrụ: September 14th, 2018 site MybirdDNA
If found some translation errors in the website. How can I report it and help you? e ikpeazụ gbanwetụrụ: July 27th, 2016 site MybirdDNA
Enwere m ike izipu nlele nke mkpọ n'otu oge ma ọ bụ ọtụtụ oge? Kedu otu m ga-esi ziga ụfọdụ nlele nyocha?
Enwere m ike izipu nlele nke mkpọ n'otu oge ma ọ bụ ọtụtụ oge? Kedu otu m ga-esi ziga ụfọdụ nlele nyocha? e ikpeazụ gbanwetụrụ: Ọgọst 18, 2017 site MybirdDNA
Enwere m ike ịtụ otu mkpọ nyocha ma mee ya na nnụnụ dị iche iche?
Enwere m ike ịtụ otu mkpọ nyocha ma mee ya na nnụnụ dị iche iche? e ikpeazụ gbanwetụrụ: July 27th, 2016 site MybirdDNA
Can we determine the age of a bird with a DNA test? e ikpeazụ gbanwetụrụ: June 14th, 2016 site MybirdDNA
Which are the species you can DNA sex? e ikpeazụ gbanwetụrụ: September 14th, 2018 site MybirdDNA
Mkpa aka? e ikpeazụ gbanwetụrụ: February 6th, 2019 site MybirdDNA
nke 5 dabere na
nnọọ obi ụtọ"
Lee niile reviews